Vana vechikoro voroja | Kwayedza
Vana vechikoro voroja
27 Apr, 2018 - 00:04	 2018-04-26T16:11:40+00:00 2018-04-27T00:01:12+00:00 0 Views
VAGARI vekwaMambo Chireya, kuGokwe North, vari kugunun’una nenyaya yevana vanobva kure vachidzidza pachimwe chikoro cheko avo vavanoti vanoroja padzimba dziri mumisha iri padyo nenzvimbo yemabhizimisi izvo zvinonzi zvave kukanganisa dzidzo yavo.
VaDominic Makwenya (40), mumwe wevabereki munzvimbo iyi, vanoti pane vana vanobva kure vachidzidza paChireya Secondary School avo vanoroja mudzimba dziri pedyo nemabhizimisi eChireya, vamwe vacho vanogumisira voita hunzenza.
“Tine vana vanobva kumisha iri kure vachidzidza pachikoro cheChireya Secondary asi vazoguma vave kuroja mudzimba dzemutaundishipi nemisha iri pedyo nechikoro kuti vakwanise kudzidza vachibva pedyo. Dzimwe dzedzimba idzi dziri kuseri kwemabhawa izvo zvinoguma zvave kuita kuti vana ava vanwe doro kana kuita humwe hunzenza, kunyanya chipfambi.
Chikoro cheChireya high School
“Chikoro ichi chinobvira Fomu 1 kusvika Fomu 4 uye ndicho choga chesekondari chiri munzvimbo iyi. Vamwe vana vanofamba mitunhu inodarika makiromita 40 kuenda nekudzoka kuchikoro kana kutodarika,” vanodaro.
Vanoenderera mberi vachiti: “Vamwe vana vedu vave kugumisira vave kuita zvekudhakwa uyewo vanasikana vonyengedzwa nevarume vachisiira chikoro panzira. Saka tinoti isu sevabereki, tinokumbira kuti dai chikoro ichi chaitwawo bhodhingi vana vogarira pachikoro.
“Dzimwe pfungwa tinoti sezvo bhodhingi ichizodhura, ngapavakwe dzimba dzinogara vana ava vari mukati mechikoro asi vachiramba vari maday scholar.”
Chikoro ichi chinonzi chinobura vana vakawanda zvikuru vanobudirira muzvidzidzo zvavo.
Votaura pamusoro penyaya iyi, Mambo Chireya – VaHenry Chidzivo (53) – vanoti vagara misangano yakawanda vachikurukura nekuda kwenyaya yekuti chikoro ichi chiitwe bhodhingi uye hurongwa uhwu hwava padanho repamusoro.
“Chokwadi vana vedu vari kugara mukati mezvidhakwa vachienda kuchikoro vamwe voguma vonwa doro, vanasikana vosiira chikoro panzira. Vana vanoguma vazadzwa zvirwere zvepabonde nekuda kwenzvimbo dzavari kugara.
“Izvozvi zororo rino, pane varipo vari kuverenga zvekugadzirira kunyora bvunzo dzegore rino. Tinovawana vari mumabhawa vachinwa doro,” vanodaro Mambo Chireya.
Vanoti vakataura nevakuru vechikoro ichi vaitungamirirwa naMai Mandinyenya vanove mukuru weChireya Secondary.
“Ndakaita musangano nemukuru wechikoro, Madam Mandinyenya nevamwe vakuru vechikoro tichikumbira kuti chiitwe bhodhingi. Pakabuda mashoko ekuti hurongwa uhwu hwasvika padanho repamusoro,” vanodaro mambo ava.
Vanotendawo vadzidzisi vepazvikoro izvi nekuzvipira kwavo mubasa.